Banye n'ime saịtị 100,000 kacha Alexa | Martech Zone
O were ọnwa isii nke ịrụsi ọrụ ike, mana taa enyochare m Alexa ma mebie akara 100,000 (ọnwa 3).
Ọ bụrụ na m ga-eme atụmatụ, enwere m ike ịsị 10 ruo 20 awa kwa izu na blọọgụ m maka ọnwa isii gara aga emeela m ebe ahụ. M na-n'ezie na-atụ anya nwere echere kwesịrị oge ya tupu New Year, ma m na na na na 6 ụbọchị mmezi.
Gịnị kpatara m ji ekerịta nke a? Dị ka ihe ọ bụla ọzọ, echere m na ọ dị mma isetịpụrụ onwe gị ihe mgbaru ọsọ. Alexa bụ ihe kasị nso m nwere 'Internet ingnye' n'ihi ya, ọ na-agwa m otú saịtị m si eme ndị ọzọ niile. Technorati na-enye otu blọọgụ m si emegide ndị ọzọ. Anọ m n'okpuru 12,000 ma nwee olileanya ịme blọgụ 5,000 kacha elu na njedebe nke afọ.
Kedu ihe m na-eme dị iche? Emeela m di na nwunye redesigns, ụfọdụ njikarịcha njin ọchụchọ, ụfọdụ tweaking nke ndebiri m, ọtụtụ blọọgụ na-ekwu na blọọgụ ndị ọzọ, ọtụtụ trackbacks… mana ọ kachasị m gbalịrị ịnọ eziokwu nke ọhụụ nke ihe blọọgụ m kwesịrị ịbụ. na-eme. Achọrọ m ịkọrọ ọmụma hoo haa gbasara ahịa na akpaaka.
Isiokwu m dịgasị iche iche, oge ụfọdụ na-agbakwunye ụfọdụ ozi nkeonwe (yabụ na ị maara m n'onwe m) na isiokwu na mmemme (akụkụ nke ndụ ọ bụla na-ere ahịa n'oge a - ozugbo ma ọ bụ n'ụzọ na-enweghị isi), mgbasa ozi na otu esi elebara anya ndị ahịa na-agbanwe, ịde blọgụ na kedu ka esi enyere aka ahia, ma obu ihe ndi ozo.
O yiri ka ọ na-arụ ọrụ nke ọma, obi dịkwa m ụtọ na ị na-anụ ụtọ ya. Biko mee ka m mara ma enwere isiokwu ndị ọzọ ị ga - achọ ịhụ ka m kpuchie. Na n'ezie, m ga-aga n'ihu na-agwa gị okwu ozugbo banyere nsogbu m na-eche banyere teknụzụ ahịa!
Jenụwarị 3, 2007 na 9:19 PM
Kpamkpam, Sean… Alexa na-enweta ihe ziri ezi na ogologo ị na-eche. Echere m na ọ bụ n'ihi na Alexa utilizes a 'random' nlele na-eme atụmatụ iru. Yabụ - ka oge na-aga, ọ na-adịkarị mma. Nke ahụ bụ otu n'ime ihe mere m ji etinye uche karị ogologo oge na ọnwa 3 bụ ihe mgbaru ọsọ m karịa 'taa'. Enweela m ntakịrị ihe kwa ụbọchị dị ka ị hụrụ na saịtị gị, mana oge na-aga bụ ihe dị mkpa.
“Chaị” na “Uh Oh” bụ n'ezie ihe m na-eme. Ana m arụsi ọrụ ike na blọọgụ ahụ ihe ikpeazụ m chọrọ ịhụ bụ na m na-ewepụ ndị mmadụ karịa inweta ma debe ndị debanyere aha. Ọ bụ naanị ụfọdụ nke arụmọrụ m.
Ọ bụkwa ezigbo ihe ngosi ebe m na-enyocha ọtụtụ ndị ahịa ndị ọzọ na blọọgụ ha. Ọ bụrụ na enweghị m ike ịmalite iru m, enweghị m n'aka na ha kwesịrị ige m ntị! Ọ bụ ọtụtụ dị ka ego onye ọrụ SEO ọkachamara na-adịghị na top 10… echegbula!
Ekele Doug! Nọgidenụ na-na oké posts enyi 🙂
Jenụwarị 6, 2007 na 11:56 PM
Ekele Doug! I gosila na ịrụsi ọrụ ike na-akwụ ụgwọ. Niile kasị mma na-alụ ọgụ spam, anyị kwesịrị a Neo o Na-atụ anya ka blog si revival gị ihe ọmụma posts.
Jenụwarị 10, 2007 na 4:32 PM
Ndeewonu! N'ịbụ onye akaebe na-arụ ọrụ n'ọfịs m, emeela m ezigbo ọrụ SEO na-arụ ọrụ iji mee ka blog anyị mara ma gụọ. Anyị na-na-na-na-akpụ akpụ na Alexa dị ka nke ọma ma ọ bụghị ma agbajiwo 100K 3-ọnwa akara. Ya mere amaara m kpọmkwem otu ọ ga-esi sie ike.
Daalụ maka ezigbo blog, nọgidenụ na ya.
Chris Kieff na MSCO
Edere ya site n'aka Onye edemede nke "ARKLỌ AKA NA-AKA gị" Mark Stevens
Daalụ maka ozi ahụ. Ọmarịcha ebe dị ọcha.
Echere m na nsonaazụ Alexa na-eme ka nnukwu saịtị / okporo ụzọ buru ibu. Na ndị pere mpe ndị mmadụ nwere ike gbaa nsonaazụ ụgha ume site na ị nweta ụyọkọ ndị mmadụ ịwụnye ogwe ngwaọrụ ma gaa na saịtị ndị ọzọ (ahụrụ m ụfọdụ saịtị ndị a ka ha na-apụta n'oge na-adịbeghị anya)
Onwe m, ana m atụle ihe ịga nke ọma nke saịtị ahụ site na uru ọ bara yana site na nzaghachi. A ụzọ nke quantifying na m bụ site na-ele m sava? S stats na-ekiri a otu ebe na-emekarị nke ụba okporo ụzọ.
Aug 9, 2008 na 9: 42 AM
Ọ bụrụ na ịchọrọ ka Alexa nye gị ndekọ ziri ezi nke okporo ụzọ gị, ịnwere ike ịwụnye wijetị nke ga-eme ka Alexa mara oge ọ bụla a na-eleta weebụsaịtị gị - ọ bụghị naanị mgbe mmadụ nwere ogwe ngwaọrụ.
Ọnye na -bụ Andre Wilburn?
Nwoke ekele! Ikekwe ị nwere ike ịnye ụfọdụ ndụmọdụ iji nyere aka nweta blọgụ m na 100k kacha elu!
Ọrụ siri ike, ịde blọgụ kwa ụbọchị, na ike = ịga nke ọma. Anọ m n’elu 50k ugbu a.
Jun 30, 2009 na 10: 22 PM
Ọ bụ ugbu a June 30, 2009 na m nwere dị nnọọ sụọ ngọngọ gị Jan 3rd post… Ka na-enye mbubreyo congrats na gị nweta. N'okpuru 100,000 na ọnwa 6 bụ rụzuru.
Anyị ewepụla weebụsaịtị anyị na Nov 2008 wee mechaa nweta ogo anyị n'okpuru 1 nde. Anyị na-arụ ọrụ na anyị ga-anọ n'okpuru 100,000 afọ gafere.
Ọfọn, nọgidenụ ezigbo ọrụ…
Jun 7, 2013 na 9:05 AM
Ndewo Doug, ugbu a Alexa m dị n’etiti 105k-110k, kedu ihe m ga - eme iji gafere mkpirisi ala na okpuru 100k. Ọmarịcha saịtị na ozi ka mma. Gbalia ihu oma, imeela!
Jun 7, 2013 na 1: 19 PM
Feb 3, 2015 na 8:29 PM
You ka na-eji akara ngosi teknụzụ eme ihe n'ịchọpụta otu saịtị si eme nke ọma?
Feb 4, 2015 n’elekere 10:37 nke abali
No, eziokwu na edebeghị m ruo nwa oge. Ekwenyere m na mmetụta mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-enwe ọtụtụ mmetụta n'oge ugbu a n'ofe niile.